Consumer Reports anotara iPhone seimwe yeakanakisa mafoni e2021 | IPhone nhau
IAmerican Consumers Association, Consumer Reports, ibhuku rinodikanwa-rinodikanwa revaAmerican. Mamirioni mazhinji evagari vanofunga nezvekukoshesa kwesangano iri kana zvasvika sarudza pane chimwe chigadzirwa kana chimwe, saka Apple inofanira kufara neshanduro yako yazvino.
Consumer Reports inoti iyo iPhone 12 Pro Max nhasi ndiyo yakanakisa iPhone yekutenga, pamusoro pemamwe emhando dzakachipa kwazvo. MuUnited States, iyo iPhone 12 Pro Max iri mutengo pa $ 1099, yeiyo iPhone 829's 12 euros.
Miviri iyi inosimbisa kuti mutsauko watinogona kuwana mu iPhone 12 Pro Max uye mune hama dzayo diki ruramisa mutengo wakakwira, uyu modhi iri sarudzo yakanakisa nhasi mukati meiyo iPhone renji:
Kunyangwe iyo 12 Pro Max ichikubhadharira $ 100 kupfuura mukoma wayo mudiki, iyo 12 Pro, inosanganisira akati wandei maawa ehupenyu hwebhatiri, skrini hombe yakati kurei uye 2,5x zoom kamera inounza iwe padhuze padhuze neichiito kupfuura iyo 2x kamera ye12 Pro.
Chimwe chinhu chiri kunyanya kurova ndechekuti iyo yechipiri inonyanya kukurudzirwa modhi neConsumer Reports ndiyo iPhone 11 Pro Max (85 mapoinzi), inoteverwa neiyo iPhone 12 Pro (84 mapoinzi). Mune chinzvimbo chechina, ndiyo iPhone 12 mini (79) mapoinzi uye inovhara chinzvimbo cheiyo 5 yakanakisa iPhone yekutenga muna 2021 neiyo iPhone 12 (78 poindi).
Kana isu tichitaura nezve iPhone, yakanakisa smartphone pane Android zvinoenderana nesangano iri ndiyo Samsung Galaxy Cherechedzo 20 Ultra 5G. Iyo isingadhuri smartphone ine 5G kubatanidza ndiyo OnePlus Nord N10 5G, modhi yatingawana isingasviki mazana matatu euros hazvingavandudzirwe kune ramangwana shanduro dzeApple, chimwe chinhu chinoratidzika sekuti vakomana pa Consumer Reports havana kufunga nezvazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Consumer Reports anotara iPhone seimwe yeakanakisa mafoni e2021
Imba Pamberi peRima ichatanga kuratidzwa muna Chikumi 11